Ahoana ny fomba fiainana tsy misy taona - Victor Mochere
Ny fahanterana dia dingana iray fa tsy indray mandeha. Tsy mifoha indray andro ianao ka mahatsapa fa antitra ianao. Ireo olana ara-tsakafo izay misy fiantraikany amin'ny zokiolona, ​​manomboka amin'ny aretim-po ka hatramin'ny hoditra efa antitra, dia manomboka amin'ny taona afovoany. Ny ankamaroan'ny aretina sy ny dysfunction mifandray amin'ny fahanterana dia fantatra ankehitriny fa vokatry ny safidy fomba fiaina. Raha fintinina, tsy ny isan'ny taona no mahatonga ny fahasimbana fa ny fomba fidinao handany izany.
Raha toa ianao ka vonona ny hanova ny zavatra hohaninao, ny fomba famenoanao, ary ny fomba fiainanao, dia azonao atao ny manararaotra ny taona antonony salama ary manemotra na misoroka ny taona fahanterana malemy. Arakaraka ny anombohanao manaporofo ny fahanterana ny sakafonao, no tsara kokoa. Na izany aza, tsy mbola tara izany. Tsotra ny drafitra raha manaraka ireto torolalana tsotra ireto ianao.
1. Ampitomboy ny fihinanana voankazo sy legioma amin'izao fotoana izao
2. Ny sakafo tena izy dia hanampy anao hijanona ho mahia
3. Tavy tsara vs tavy ratsy
4. Raiso ny fanampin-tsakafo mety
5. Manomboka mihetsika
Azonao atao ny manaraka an'io fahazarana ara-tsakafo tena ilaina io mba hampiadana, hampijanonana, na hanovana ny fizotry ny fahanterana. Ny sombintsombin'ny oksizenina fantatra amin'ny anarana hoe oxidants na radika maimaim-poana dia antony lehibe mahatonga ny aretina rehetra mifandraika amin'ny taona, manomboka amin'ny aretim-po sy ny fahaverezan'ny fitadidiana ka hatramin'ny homamiadana sy ny katarakta. Raha avela tsy voafehy ireo oxidants ireo dia miteraka fahasimbana sela sy sela, miharatsy rehefa mihantitra isika. Soa ihany fa manana rafitra radika antsoina hoe antioxidants ny vatana izay manafoana sy manafoana ireo oxidants manimba ireo.
Maherin'ny 12,000 ny fitambarana antioxidant hita ao amin'ny voankazo sy legioma maro loko. Maro amin'ireo fitambarana ireo ihany koa no mampihena ny areti-maso, izay fototry ny aretina maro manomboka amin'ny aretim-po ka hatramin'ny Alzheimer. Ny fampitomboana ny fihinananao vokatra voajanahary dia mampihena ny risika amin'ny aretina rehetra mifandraika amin'ny taona. Manampy amin'ny fametrahana ny deck izany mba hanitarana ny taona antonony salama amin'ny taona 80 na mihoatra, fa ny fikarohana dia mampiseho fa ho tanora kokoa ianao ary ho mora kokoa amin'ny fifehezana ny andilanao.
Ny fanalana ny lanja fanampiny dia eo ambony indrindra, miaraka amin'ny fialana amin'ny sigara ho iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanitarana ny taonao ho olon-dehibe salama ho 70 sy 80 taona. Ny matavy be loatra dia mety hampidi-doza ho an'ny aretina maro, anisan'izany ny tsy firaharahiana amin'ny olon-dehibe efa lehibe, indrindra fa ny lehilahy mahita ny fiakaran'ny vidin'ny diaper ho an'ny lehilahy. Miaraka amin'ny mihoatra ny valo amin'ny olona rehetra miady amin'ny matavy loatra izao, ny fampihenana lanja fotsiny dia hanampy taona maro ho an'ny fiainanao sy taona ho an'ny fiainanao.
Na dia tsy afaka mahatratra ny lanjan'ny vatana tsara indrindra aza ianao, ny olona matavy loatra dia hampihena ny risika amin'ny ankamaroan'ny aretina mifandraika amin'ny taonany ary hanitatra ny taonany ara-pahasalamana raha very 10% amin'ny lanjany ankehitriny. Ho hitanao fa tsy dia sarotra ny mampihena lanja raha mifikitra amin'ny fitsipika mahitsy ianao: ferana ny fihinanana sakafo haingana sy voahodina ary mifantoka amin'ny sakafo manontolo. Ny sakafo voahodina dia tsy manampy kilao fotsiny fa manafaingana ny fahanterana koa. Rehefa voajanahary ny sakafonao dia mihena ho azy ny kaloria.
Ny tavy sasany toy ny tavy trans sy ny tavy tototry dia manafaingana ny fahanterana ary mampitombo ny mety ho aretim-po, fahaverezan'ny fitadidiana, homamiadana ary aretina hafa. Ny olona iray dia tokony hiala amin'ny sakafo mahaantitra, toy ny hena mena, ny vokatra vita amin'ny ronono matavy, ary izay rehetra vita amin'ny menaka anana hydrogène. Ny tombony hafa amin'ny fampihenana ny tavy matavy sy trans dia mety hanatsara ny fiainam-pitiavanao. Rehefa avy nihinana sakafo be matavy dia mihena 50% ny tahan’ny testosterone ao amin’ny ra ho an’ny lehilahy. Fanampin'izany, ny sakafo matavy dia manakatona ny lalan-drà, izay matetika mahatonga ny tsy fahampian-tsakafo.
Rehefa mihalehibe ianao dia mila vitaminina bebe kokoa. Raiso, ohatra, ny vitaminina D. Rehefa tratran’ny tara-masoandro ny hoditsika, dia mamokatra vitaminina D ny vatantsika, saingy mihalefy izany fahaizana izany rehefa mihantitra. Ny olona ao anatin'ny roapolo taona dia tsy mamokatra afa-tsy 80% amin'ny vitamin D izay novokarin'ny vatany fony izy ireo tao amin'ny kilasy fahatelo. Rehefa mahatratra 70 taona ny olona iray dia nidina ho 40% monja izany vokatra izany. Vokatr'izany, ny loharanon-tsakafo dia lasa manan-danja hatrany amin'ny fihazonana taolana matanjaka mandritra ny androm-piainana.
Noho izany, raha ampy ny 200IU tamin'ny faha-roapolo taonanao, dia mitaky hatramin'ny 1000IU ianao amin'ny efapolo sy dimampolo. Toy izany koa ny B12, kalsioma ary otrikaina hafa. Tsy azo atao ny manantena ny hahazoan'ny olona ireo otrikaina ireo amin'ny alàlan'ny sakafo fotsiny, koa aza manara-maso sy mameno ny banga amin'ny famenoana vitaminina sy mineraly antonony.
Tsy afaka misoroka izany ianao: mila manao fanatanjahan-tena ianao. Mba handoro tavy sy hitazonana ny fonao sy ny sainao amin'ny endriny tsara, dia mila fanazaran-tena isan'andro ianao (toy ny mandeha an-tongotra haingana, milomano, mitaingina bisikileta, na jogging) ary farafahakeliny in-droa isan-kerinandro amin'ny fanatanjahan-tena (mibata lanja), na dia manainga ronono fotsiny aza. siny ao an-dakozia. Ny vaovao tsara dia fonosana feno ianao. Ny soso-kevitra momba ny sakafo hiarovana ny fonao dia hitondra soa ho an'ny fahasalaman'ny ati-doha ary hanampy anao hihazona loko mamirapiratra. Mihinàna amim-pahendrena.
Mety tsy ho voafehinao ny faharetana, fa ny fahazarana ara-pahasalamana maro dia mety ho ela velona. Ny fisotroana kafe na dite, ny fanatanjahan-tena, ny torimaso ampy, ary ny famerana ny fisotroana alikaola dia ohatra rehetra. Ireo fahazarana ireo, raha atambatra, dia afaka manatsara ny fahasalamanao ary mametraka anao amin'ny lalana mankany amin'ny fiainana lava.
Mpiasa fiarovana 20 lehibe indrindra eran'izao tontolo izao 2022